Naya Post Nepal | बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणलाइ शाहरुख खानले यस्तो गरेपछि रुदै मिडियामा….
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणलाइ शाहरुख खानले यस्तो गरेपछि रुदै मिडियामा….
एजेन्सी । बलिउड इन्डस्ट्रीकी मस्तानी उर्फ दीपिका पादुकोण को फ्यान फलोइङ निकै ठूलो छ । उनको अभिनयदेखि लिएर सौन्दर्यसम्म सबै कुरामा उनका फ्यानहरु मोहित रहेका छन् । बलिउडमा यी नायिकाले एकभन्दा बढी चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन् ।
साथै, दीपिकाले बलिउडमा चलेका र दिग्गज कलाकारहरूसँग स्क्रिन सेयर समेत गरिसकेकी छिन् । दी,,पिका कुनै न कुनै कारणले चर्चामा रहन्छिन् । विगतमा अभिनेत्री आफ्नो फिल्म ‘गहरियान’ लाई लिएर चर्चामा थिइन् ।
जहाँ उनी कयौं पटक फिल्म मेकर र कोस्टारसँग प्र,,मोशन गरेकी थिइन् । तर उनको फिल्मलाई फ्यानले खासै रुचाएनन् । अभिनेत्रीको यो फिल्ममा फ्यानको प्रतिक्रिया राम्रो भएन र उनको फिल्म फ्लप भयो । हालै दीपिकाले आफ्नो जीवनसँग जोडिएको एउटा ठूलो खुलासा गरेकी छिन् ।
यो सुनेपछि उनका फ्यानहरु छक्क परेका छन् । आफूलाई बलिउडमा आउनका लागि शरीरको शल्यक्रिया गर्न सल्लाह दिइएको अभिनेत्रीले बताइन् ।
अभिनेत्रीले फिल्म इन्डस्ट्रीमा धेरै कुरा सिकेको, धेरै पीडा भोगेको बताइन् । उनले कुनै बेला आफूलाई स्तन प्रत्यारोपण को सल्लाह दिएको बताईन् । तर उनले यो सल्लाह मानिनन् । अभिनेत्रीले आफूलाई शाहरुख खानले पनि सल्लाह दिएको बताइन् ।
किङ खानले उनलाई आफूले चिनेको व्यक्तिसँग काम गर्न भनेका थिए । तिनीहरूसँग काम गर्दा तपाईंले धेरै कुरा सिक्नु हुनेछ। साथै तिनीहरू सँग सम्झनाहरू बनाउनुहुनेछ। दीपिकाले शाहरुखको यो सल्लाह आफ्नो लागि निकै उपयोगी भएको बताइन् ।
अब दीपिका पादुकोणको चाँडै फिल्म ‘पठान’मा देखिने छिन् ।यस फिल्ममा दीपिकासँग शाहरुख खान, सलमान खान, जोन अब्राहम, डिम्पल कपाडिया, ऋतिक रोशन, आशुतोष राना जस्ता ठूला तथा दिग्गज कलाकारहरु देखिनेछन् ।
दीपिका पादुकोणको यो फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म हो । उनका फ्यानहरु उनको यो फिल्मको प्रतिक्षामा छन् । उनको फिल्म यसै वर्ष रिलिज हुँदैछ ।
२०७९ बैशाख १२, सोमबार प्रकाशित0Minutes 758 Views